‘प्रचण्ड’लाई अध्यक्ष ओलीको पत्र : समस्याको जड शीर्ष नेताहरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा « Khabarhub
‘प्रचण्ड’लाई अध्यक्ष ओलीको पत्र : समस्याको जड शीर्ष नेताहरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एंव नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पार्टीको काम कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका छन् । स्थायी कमिटीको बैठकअनुसार पार्टी अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रचण्डले लेखेको पत्रका विषयमा उठेको सवालको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले महाधिवेशन गराउने वा पार्टी केन्द्रीय कमिटि बैठकको एजेण्डा बनाउने विषयमा के के गर्नुभयो भनि प्रश्न समेत गरेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेख्दै ओलीले भनेका छन्- भदौं २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकबाट हामी दुई अध्यक्षले गर्ने काम स्पष्ट थियौ । मैले यसअघि नै पानि–५ को निर्देशन ३ मा उल्लेखित यससम्बन्धी ४ वटा बुँदाहरू उल्लेख गरिसकेको छु ।
मेरो भागमा परेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी सबै कामको जश-अपजशको जिम्मा मै लिन्छु । पार्टीको नीतिगत निर्देशनको आलोकमा अध्यक्ष प्रचण्डसँग नियमित सल्लाह गरेरै सरकार सञ्चालन गर्दै आएको छु । अझ काहींकतै कमी भएको भए खुल्ला छलफल गरौं, सच्याऔं र अघि बढौं मैलै सधैँ यही भन्दै आएको छु ।
तर, के कमरेडहरूले आफ्नो भागमा परेको कामको लेखाजोखा कहिल्यै गर्नुभएको छ ? म आवेग र उत्तेजनाविना विनमताका साथ प्रश्न गर्न चाहन्छु – कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालनको जिम्मा पाउनुभएको अध्यक्ष कमरेडले आफ्नो भागमा परेको कामका सन्दर्भमा के गर्नुभयो ?
पछिल्लोचोटि १५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको (अझ सचिवालयले त १० दिनमा सक्ने भनेको) एकीकरणको काम अहिले कहाँ पुग्यो ? त्यसको रोडम्याप के बन्यो ? मेरा कारणले हुन नसकेको भए, यहाँले गर्नुभएको गृहकार्यमा के–केमा र कहाँ मेरो अवरोध रह्यो ?
पत्रमा उनले महाधिवेशनको तयारीको लागि बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकका एजेण्डा र प्रस्ताव तयार गर्न के–के गृहकार्य गर्नुभयो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
ओलीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘त्यसमा मसँग यहाँले के सहयोग माग्नुभयो ? या मैले कहीँ बाधा अवरोध पुर्‍याएँ कि ?, मलाई थाहा छ, हामी जहाँको त्यहीँ छौं । अहिले पनि हजारौंको संख्यामा पुराना अनुभवी कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन नै हुनुहुन्छ । पार्टी कमिटीका गतिविधिहरू अवरुद्ध छन् ।’
यसैबीच अध्यक्ष ओलीले पार्टीका शीर्ष नेताहरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पलाउँदा पार्टीभित्र अहिलेको अवस्था आएको दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित पाँच नेताले बैठक बोलाउन माग गर्दै लेखेको पत्रमा ओलीले नेताहरुमा प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हुँदा समस्या आएको प्रस्टै संकेत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
‘पटक पटक मन्त्री र प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएका तपाईं सचिवालयका कमरेडहरुलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, के विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीको हातखुट्टा यसैगरी बाँध्ने र घेराबन्दी गरिएको थियो र ? थोरै नै होला सरकारले गरेका सकारात्मक काम सरकारमा रहनेले मात्रै प्रचार गर्ने, पार्टीपंत्तीलाई मौन राखिने गरिएको थियो र ?’ ओलीको पत्रमा छ ।
ओलीले पार्टीमा बहुमत अल्पमतको खेल घामछायाँजस्तो हुने बताएका छन् ।
‘गुटबन्दी र आग्रहको बाटोमा नहिँड्ने हो भने पार्टी भित्रको पक्षधरता आमरुपमा विषय आधारित हुन्छ, हुनु पनि पर्छ । बहुमत, अल्पमतको अंकगणित त त्यसै पनि कहिले घाम, कहिले छायाँ जस्तो हुन जान्छ । छेउछाउमा बसेका साथीहरुले सिठ्ठी बजाउँदा हौसिँदै जाने हो भने नीति र विधिबाट निर्णय गर्ने होइन, कृत्रिम रुपमा सिर्जित पर्सेप्सनको आधारमा बहकिने खतरा पैदा हुन्छ’ प्रधानमन्त्री ओलीको पत्रमा छ ।
यसबाहेक ओलीले पत्रमा दाहालमाथि प्रश्न गरेका छन्, कमरेड प्रचण्डले मलाई बेलाबेलामा भन्ने गर्नुहुन्छ–’मलाई फकाउनुस् न, म फकिने मान्छे, फकिन्छु नि ? ’ कसरी र के भन्दा कमरेड फकिनु हुन्छ र भन्नुस् न त ! मुलुकको समृद्धिका लागि, जनताको खुशीयालीका लागि, नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको अग्रगतिका लागि, पार्टीलाई थप सुदृढ गर्नका लागि ! हुन्छ, म तपाईंलाई फकाउन तयार छु । ल मैले फेरि फकाएँ ! आउनुस् गुटबन्दी र दाउपेच छाडौं, हाम्रो यो प्यारो पार्टीलाई एकजुट बनाऔं !’
ओलीले नियमित प्रक्रियाबाट हुने नेतृत्व हस्तान्तरण छाडेर किन अर्कोबाट समातिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ओलीले लेखेका छन्, ‘मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रुपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचनपश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु ।
तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ–’चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ? त्यसरी नै, दुई वर्षपछि आमनिर्वाचन हुन्छ । मेरो विश्वास छ–नेकपाको विजय यात्रा जारी नै रहनेछ । त्यसपछि नयाँ नेतृत्वको खोजी त हुने नै छ । के कमरेडहरूलाई दुई वर्षपछि नेकपाको भविष्य सुरक्षित छ भन्ने विश्वास टुटिसकेको हो र, होइन भने, फेरि किन सधैंभरि सरकारका लागि दौडधुप ?’
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पत्रमा आफूमाथि लगाइएको आरोपको जवाफ दिएका छन्, ‘अध्यक्ष प्रचण्डसहित कमरेडहरुले सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीलाई क्रमशः ‘गुट, हुल्लडबाज, सडकछाप’ कमिटी भनिस् भन्ने अनर्गल आरोप लगाउनु भएको छ । मैले त कमरेडहरु यतिसम्म झुठा कुरा घोलेर कथा बुन्न सक्नुहुन्छ भन्ने सोच्न पनि सक्दिनँ । साँढे तीन बीस उमेर कटाइसकेका सहपाठीबाट यस्तो अपत्तिजनक आरोप किन र के का लागि ?’
यसबाहेक दाहाललाई ओलीको प्रश्न छ, ‘खास गरेर प्रचण्ड कमरेडलाई म प्रश्न गर्छु–केही दिनको कचपच, एकखाले सहमति, त्यसको २/४ दिन पछि फेरि उही कचपच…को शृंखलामा हामी कहिलेदेखि छौं र कहिलेसम्म रहने ? कमरेडहरुको यो ‘तमासा’बाट आजित हुनुभएको छैन ? देश, जनता र समग्र पार्टीपंक्तिले हामीबाट गरेको अपेक्षा यही हो त ?’
प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १० : ४६ बजे